Inona no borosilicate fitaratra?
Inona no borosilicate fitaratra? Noeritreretinao ve hoe nahoana no misy fitaratra afaka mandeha avy amin'ny vata fampangatsiahana ny fatana ary miverina indray raha ny hafa kosa tsy afaka? Tsara ny Fahamarinana dia mitaky fanazavana ny enim-bolana amin'ny Fizika, mianatra oharina amin'ny hakitroky ny tsy fivadihana sy ny drafitra coefficients ny mafana fanitarana, fa ny fohy ny ...
borosilicate avo fitaratra siny fitehirizana amin'ny bosoa sarony na volotsangana hazo sarony
by mpitantana ny 19-04-29
Varingarin'i fitoerana zavatra Amin'ny Cork sarony na Bamboo hazo sarony Glass airtight mandatsa-dranomaso amin'ny bosoa lids na volotsangana hazo sarony, tsara noho ny mitahiry mofomamy, vatomamy, lafarinina, tsaramaso, zava-manitra voamadinika sns ny fitaratra madio mamela anao hahita izay no isaky ny sininao manao famantarana ny mora ny votoatiny. Multi-tanjona, bea ...
Glass fantsona amin'ny bosoa sarony
ny mpitantana ny 19-04-26
Ny fantsona amin'ny bosoa fitaratra sarony Matetika no ampiasain'ny laboratoara, fa ny fisedrana stopper fantsona amin'ny bosoa na ny olon-kafa dia ampiasaina koa mba hifehezana ny sasany zava-manitra toy ny lavanila pods mba hahafahan'izy ireo hitana ny tsiro rehetra sy ankasitrahana. Ny sasany miaraka amin'ny corks fitaratra fantsona madio haingon-trano ihany koa ny zavatra maneho fasika, zava-mamy O ...
Glass lovia manana mampiasa faritra malalaka
Round Glass ao amin'ny lovia fito feno fanafody ara-tsiansa sy ny orinasa dia fitsipika noho ny Nihazonako fahaiza-manao, ary ny inert maha fitaratra. Laboratoara foana mampiasa fitaratra kely lovia fito feno ny fitiliana ary fanatobiana simika. Kely dia be ny fanafody dia zaraina soa aman-tsara ao amin'ny lovia fito feno fitaratra amin'ny ...
Borosilicate fitaratra siny fitehirizana dia safidy tsara indrindra ny hampiseho ny vokatra ao amin'ny toeram-pivarotana, fisehoan-javatra manokana, na ho toy ny fonosana safidy ho ambony talantalana sy ny piarovana-karazany.